FIATREHANA FIFIDIANANA - CRAM : Nanolo-kevitra hiadiana amin’ ny hala-bato
Tsy afa-misaraka amin’ny fiatrehana ny fifidianana ny fanahiana amin’ny hisian’ ny hala-bato. 19 septembre 2018
Any amin’ireo birao fandatsaham-bato heverina ho lavitr’andriana no tena ahiana amin’izany, raha ny fanehoan-kevitra noentin’ireo olom-pirenena mpifidy. Azo antoka anefa fa tsy maintsy hisy ny fandraisan’andraikitra sy ny fepetra maty paika hataon’ny eo anivon’ny Céni hirosoana amin’izany.
Iray volana sy 18 andro sisa dia hiatrika fifidianana ho amin’ny fihodinana voalohany i Madagasikara. Efa saika tsara lamina avokoa ny pitsopitsony rehetra hoenti-miatrika izany. Na ireo antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana isan-tokony dia efa samy seriny avokoa mba hahatomombana ny fifidianana am-pilaminana.
Ho an’ny faribolana mpanara-maso ny ho avin’i Madagasikara na ny Cram manokana dia nisy ny soson-kevitra nomen’izy ireo mba hiadiana sy hisorohana mialoha ny hala-bato. “Mba hiarovan’ny kandidà tsirairay ny safidin’ireo olom-pirenena tonga mifidy azy dia mila manana solon-tena na « délégué » nahazo fiofanana manokana avy amin’ny Antoko politikany sady solontena tsy voavidim-bola isaky ny biraom-pifidianana ireo kandidà miisa 36 mba hialana amin’ny hala-bato na ny hosoka”, hoy ny fanehoan-kevitra noentin’ireo mpikamban’ny Cram.
Nambarany fa manana ny andraikiny lehibe ireo solontenan’ny kandidà isaky ny birao fandatsaham-bato ireo, izy ireo no tokony hanara-maso akaiky izay mety ho hosoka mitranga eny anivon’ireny birao fandatsaham-bato ireny. Anisan’izany, ohatra, ny fampiasana karapanondrom-pirenena maro, ny fitondrana biletà tokana avy any ivelany izay efa voaisy marika mialoha an’ilay kandidà hofidiany sy ny endrika hosoka maro isan-karazany.
Ady amin’ny hala-bato
Mba tsy hahatanteraka ny fikasan-dratsin’ireo mikasa ny hangala-bato sy ireo izay efa zatra ny lalan-dririnina ka mbola mitady hanao izany dia nisy ny soson-kevitra naroson’ny Cram. “Ny fampiasana ny ranomainty tsy mora fafana izay tsindrina tsara amin’ny lavo-tondron’ ny olom-pirenena tonga mandatsa-bato.
Ny fijeren’ny filohan’ny Birao fandatsaham-bato sy ireo mpiara-miasa aminy ny lokon’ny bileta tokana alohan’ny handrotsahan’ny olom-pirenena iray izany safidiny izany amin’ny vata fandatsaham-bato sao sanatria tsy mitovy amin’ny noraisiny teo ambony latabatra. Ny fananan’ny solontenan’ny kandidà laharana finday efa voasoratra any amin’ny Foibe toeran’ny kandidà mba hahazoany mampita ny vaovao marim-pototra raha sanatria misy tranga tsy mifanaraka amin’ny lalàm-pifidianana eo anivon’ny Birao fandatsaham-bato mandritra ny 7 novambra 2018.
Ny fampitana faran’ izay haingana any amin’ny Foiben- toeran’ny kandidà tsirairay izay manana solontena ao amin’ny Birao fandatsaham-bato ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana tsy misy kosokosoka”. Ireo ny soson-kevitra amin’ny ampahany nomen’ny Cram. Nohamafisin’ity vovonan’ny fiarahamonim-pirenena ity hatrany fa tena ilaina ny fisian’ireo solontenan’ny kandidà isaky ny birao fandatsaham-bato.
Tafakatra hatrany amin’ny 9 913 599 ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana amin’ny lisi-pifidianana manerana an’i Madagasikara izay manan-jo hifidy amin’ny 07 novambra 2018 any amin’ny birao fandatsaham-bato miisa 24 852. Efa naverin’ny Céni naparitaka manerana ny Fokontany ireo lisi-pifidianana izay azon’ny olom-pirenena hamarinina.